तपाईंको रूपान्तरण लक्ष्यहरू नष्ट गर्न के तपाईंले ट्र्याकिंग गर्नुपर्दछ Martech Zone
यी दिनहरू, प्राय सबै विश्लेषण त्यहाँ बाहिर उपकरणहरू तपाईं c ट्र्याक गर्नघटनाहरू चाट्नुहोस्। क्लिकहरूले प्रयोगकर्ताले तपाईंको साइटसँग गरेको प्रायः अन्तर्क्रियाहरू प्रतिनिधित्व गर्दछ। तर एक पटक तपाईसँग त्यो डाटा हुन्छ, अब के हुन्छ? तपाईले एकल क्लिकलाई एक आगन्तुकले ट्र्याक गर्न सक्नुहुनेछ, तर त्यो डेटाको बाढी आउनुपर्नेछ। ट्र्याकि Click क्लिक गर्नुहोस्, जब सही रूपमा लागू हुन्छन्, व्यक्तिले तपाईंको सामग्रीलाई कसरी प्रतिक्रिया दिन्छन् र तपाईंको मार्केटिंगले तपाईंको रूपान्तरण फनेललाई कसरी असर गर्दछ भनेर ठ्याक्कै बुझ्नको लागि सबैभन्दा शक्तिशाली उपकरणहरू मध्ये एक हुन सक्छ।
यस पोष्टमा म तपाईंलाई क्लिक ट्र्याकिंगमा मद्दतको लागि छ वटा सरल दिशानिर्देशहरू राख्छु। मेरो लक्ष्य भनेको तपाईंलाई तपाईंको साइटको मूल्यमा अन्तर्दृष्टिका लागि कार्य योग्य डाटा स collect्कलन गर्न र विभिन्न प्रकारका साइट अप्टिमाइजेसनको सम्भाव्यता बुझ्नको लागि मद्दत गर्नु हो।
१. सबै कुरा ट्र्याक नगर्नुहोस्
सबै क्लिकहरू बराबर सिर्जना गरिएका छैनन्। तपाईंको साइटको समग्र UI को केवल सानो अंश मात्र ट्र्याक गर्न आवश्यक छ। यदि कार्यले तपाईंको ब्यापारमा उच्च-औसत ब्याज इंगित गर्दैन भने, यो केवल शोर हो। यो तपाइँ तपाइँको शीर्ष आगन्तुक को व्यवहार मा कुनै अन्तरदृष्टि दिदैन। नेभिगेसन, पेज पेजिनेसन र इन-टेक्स्ट लिंकमा क्लिक विरलै ट्र्याक गर्न लायक हुन्छ, दुर्लभ परिस्थितिहरूमा बाहेक।
२. अर्थपूर्ण अन्तर्क्रिया ट्र्याक गर्नुहोस्
चीजहरूको लागि हेर्नुहोस् जुन तपाईं सम्भावित ग्राहकहरू गर्न चाहनुहुन्छ। ई-वाणिज्य को मामला मा, यो हो भाडोमा हाल लिंक र चेकआउट बटन, र केहि पृष्ठहरू ती महत्वपूर्ण मार्गमा साथ। A एक उद्धरण अनुरोध फारम वा एक नेतृत्व फार्म को लागी एक सम्पर्क फार्म दुबै राम्रो उम्मेदवार हो। एक अनलाइन सेवा वा SAAS अनुप्रयोगको मामलामा, तपाइँको मूल्य निर्धारण पृष्ठमा लिंक सुरू गर्नको लागि राम्रो स्थान हो।
Your. तपाईको ग्राहक जीवनशैलीका चरणहरू बारे सोच्नुहोस्
तत्वहरू ट्र्याक गर्नुहोस् जुन एक जीवन चक्र चरणबाट अर्कोमा संक्रमण संकेत गर्दछ। यहाँ एक ई वाणिज्य उदाहरण छ:
अधिग्रहण - भ्रमणकर्ता तपाइँको वेबसाइटमा खोजी पछि वा अर्को साइटमा लिंकमा क्लिक गरेपछि आउँछ। मा क्लिक क्लिक गर्नुहोस् उत्पादनहरू ब्राउज गर्नुहोस् टांक।
पूर्व खरीद / साइन अप - व्यक्ति तपाईंको वरिपरि शपिंग गर्दछ वा तपाईंको सेवामा संलग्न हुन्छ। मा क्लिक क्लिक गर्नुहोस् साइन अप or खाता सिर्जना गर्नुहोस् टांक।
मंगनी - व्यक्ति तपाइँको साइट को उपयोग को लागी फर्कन्छ। यसमा क्लिक ट्र्याक गर्नुहोस् भाडोमा हाल टांक।
खरीद / रूपान्तरण - व्यक्तिले केहि खरीद गर्दछ वा लिड-जेनेरेसन फारम भर्दछ। यसमा क्लिक ट्र्याक गर्नुहोस् जाँच गर्नुहोस् टांक।
रेफरल - व्यक्ति तपाईंको मिडिया मा सामाजिक साइट साझा वा अन्य आमन्त्रित गर्दछ। यसमा क्लिक ट्र्याक गर्नुहोस् फेसबुक मनपर्‍यो विजेट
निस्सन्देह, माथिको प्रक्रिया बिभिन्न व्यवसायमा फरक हुनेछ, तर तपाइँ विचार प्राप्त गर्नुहुन्छ।
A. साधारण रेटिंग प्रणाली प्रयोग गर्नुहोस्
तपाईंले ट्र्याक गर्नुहुने प्रत्येक UI तत्वको स्कोर हुनुपर्दछ। यो १ देखि १०, वा प्रतिशत जत्तिकै साधारण हुन सक्छ। तपाईले प्रयोग गर्ने रेटिंग प्रणाली वास्तवमै फरक पर्दैन, यो लामो समयसम्म यो लगातार छ। केवल यसलाई दर्साउनुहोस् कि अन्तर्क्रिया कत्तिको महत्त्वपूर्ण छ। यस संयन्त्रले तपाईंलाई प्रयोगकर्ता कार्यहरूलाई प्राथमिकता दिन बल गर्दछ, जसले अधिक अर्थपूर्ण रिपोर्टहरू सिर्जना गर्न मद्दत गर्दछ। उदाहरण को लागी, तपाईले एक रिपोर्ट बनाउन सक्नुहुन्छ जसले तपाईलाई shows / / १० को अ with्कका साथ or वा बढि चीजहरू गरेको देखाउँदछ।
Your. तपाईको क्लिक घटनाहरु वर्गीकृत अर्थपूर्ण नामकरण कन्वेशनहरु को प्रयोग गरेर
विवरणमा समाहित हुनु अघि, पहिला तत्वहरूको प्रकारहरू विचार गर्नुहोस् कसैले तपाईंको साइटमा अन्तर्क्रिया गर्न सक्दछ। एउटा साधारण कोटी भिडियो हो। जे होस्, यदि तपाईंसँग तपाईंको साइटमा धेरै प्रकारका भिडियोहरू छन् भने, तपाईं तपाईंको भिडियो कोटीहरूमा विशिष्ट हुन सक्नुहुन्छ।
उदाहरण को लागी, मानौं कि आगन्तुकहरु संग बिक्री उत्पादनहरु हेरी आफ्नो उत्पादहरु को बारे मा अधिक जान्नु को विकल्प छ, र पनि प्रशिक्षण भिडियोहरु को लागी अर्को सेक्सन भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ। यी दुई धेरै फरक कोटीहरू छन्। तिनीहरूलाई फरक पार्न, तपाईं आफ्नो क्लिक घटनाहरू उपसर्ग गर्न सक्नुहुनेछ भिडियो - बिक्री, किनकि तपाईं यी भिडियोहरू क्लिक गर्न संभावनाहरू चाहनुहुन्छ। को लागी दोस्रो श्रेणी भिडियो - प्रशिक्षण सम्भावित वर्तमान ग्राहकहरु लाई लक्षित गर्दछ जसले अझ बढी सिक्न चाहान्छन्।
The. क्लिक गर्नुहोस् ट्र्याकिंग ट्र्याक गर्न नसकिने ट्र्याक गर्नका लागि
हामी सबैलाई पृष्ठ दृश्यहरूको बारेमा थाहा छ, तर पृष्ठ दृश्यहरू ती हुन् जुन प्रयोगकर्ता क्लिक पछि हुन्छन्, र त्यो क्लिक नेभिगेसन ट्रिगर गर्दछ। तर नेभिगेसन केवल प्रयोगकर्ता-ब्यबहार कहानीको अंश हो। एक आगन्तुकले अन्तर्क्रिया गरेको सबै कुराको बारेमा के हुन्छ? अनुकूलन विजेटहरू, लाइट-बक्सहरू, मोडल संवादहरू, एकल-पृष्ठ-अनुप्रयोगहरू, जाभास्क्रिप्ट नियन्त्रणहरू, सामाजिक साझेदारी बटनहरू ... सूची लगभग असीमित छ। बाह्य लि Even्क पनि पृष्ठ दृश्य मार्फत ट्र्याक गर्न सकिदैन। यी चीजहरूको एक धेरै तपाईं आफ्नो प्रयोगकर्ताहरूको बारेमा मूल्यवान अन्तर्दृष्टि दिन सक्छ। उदाहरण को लागी, यदि कसैले अधिक को लागी उत्पाद विवरण विस्तार गर्दछ, तिनीहरू सम्भवतः संलग्न छन्। यदि कोहीले तपाइँको फेसबुक बटन प्रयोग गरेर साझेदारी गर्छ भने, उनीहरूले तपाइँको ब्रान्ड / साइट / सेवा प्रस्तावलाई मन पराउँछन्। यी सबै अन्तर्दृष्टिहरू तपाईंले मिस गर्नुहुनेछ यदि तपाईं पृष्ठ दृश्यहरूमा मात्र निर्भर हुनुहुन्छ।
टेम्प्लेट वा पृष्ठ कोडिंग औसत बजारका लागि डरलाग्दो हुन सक्छ। र तपाइँको विकास टोली र एजेन्सी संग काम समय उपभोक्ता हुन सक्छ वा असम्भव हुन सक्छ तपाइँको ट्र्याकिंग रणनीति मा आवश्यक परिवर्तन गर्न को लागी। ट्रायलफायर वेब स्थापित गर्नका लागि भिजुअल सम्पादक हो विश्लेषण। ट्रायल फायरले तपाईंलाई नियमित भ्रमणकर्ता जस्तो तपाईंको वेबसाइटमा नेभिगेट गर्न अनुमति दिन्छ, तर तपाईंले प्रत्येक क्लिकले 'ट्र्याकि pin पिन' थप्न क्षमता दिनुहुन्छ। लिंक, बटन, र फिल्डहरू सहित तपाईं कुनै पनिमा ट्र्याकि pin पिन थप्न सक्नुहुन्छ।
ट्रायलफायर के त्यो सरल छ - जाभास्क्रिप्ट वा विकासकर्ता कौशल आवश्यक छैन। सजिलैसँग तपाईको उच्च-मानको कार्यहरू र एक अन्तर्ज्ञानी स्टार रेटिंग प्रयोग गर्ने आगन्तुकहरू पहिचान गर्नुहोस्। ट्रायरफायरले ट्र्याक गरेको डाटा पठाउँदछ विश्लेषण, मार्केटिंग र CRM उपकरणहरू जुन तपाईं आफ्नो व्यवसाय बढाउन प्रयोग गर्नुहुन्छ। त्यसोभए तपाईले रिपोर्टहरूमा रेजिमेन्ट खण्ड आगन्तुकहरू गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईंको मार्केटिंग स्वचालन पहलहरू र स्कोर लिड्स।
टैग: अधिग्रहण ट्र्याकिंगभाडोमा हालविश्लेषणविश्लेषण घटना ट्र्याकि।चेकआउटघटना ट्र्याकिंगघटना ट्र्याकिंग अनुप्रयोगघटना ट्र्याकिंग प्रयोगकर्ता इन्टरफेसपूर्व खरीद ट्र्याकिंगरेफरल ट्र्याकिंगएउटा उद्धरण अनुरोध गर्नुहोस्साइन अप ट्र्याकिंग